Ukuze kanye empilweni yami ukuvakashela abadumile iqhawe-dolobha Volgograd kufanele zonke izakhamuzi zezwe lethu. Futhi uma got lapha, akumele abe nomkhawulo izinto emzini. ukuzilibazisa Excellent Volgograd kanye Volgograd esifundeni iyakwamukela kokubili abakhileyo zomdabu ayengaphansi kwaseStalingrad, futhi zonke izimenywa zakhe. Kutholwe eseholidini e kwenye yalezi zindawo, izivakashi bazokwazi bekuqonda ngokugcwele ubuhle bemvelo bendawo nobuhle omunye wemifula emikhulu kakhulu eRussia ngaphansi kwegama iVolga.
Cosy Country Club
"Oilman" - ehostela (Volgograd), etholakala eduze edolobheni-iqhawe. Lena yindawo enhle kube abomdabu ukuphumula. Izivakashi Volgograd, engeke nje ukuhlola lo muzi ngokwawo, kodwa futhi ubunyoninco ezizungezile uzokwazi ukuhlala lapha futhi kakhulu uphumule induduzo.
Base ukuzilibazisa "Oilman", okuthiwa futhi club lizwe, kuyinto eyinkimbinkimbi isakhiwo yokuhlala main futhi bathinteka izindlu ezakhiwe ngokhuni. Kukhona on-site yokudlela futhi ibha, indawo yokubhukuda, Gazebo imibuthano nabangani kanye izoso, lapho izivakashi angapheka kebabs okumnandi. Konke lokhu ivuliwe endaweni landscaped phakathi Pines ubude, libe lincane nomhlophe birch kanye oki eminyaka ubudala.
Hamba kule ndawo, etholakala eduze Krasnoslobodsk, okungukuthi edolobheni elincane elibizwa ngokuthi The Second Five-Year Plan, nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, ngoba isebenza eziyinkimbinkimbi unyaka wonke. "Oilman" - ehostela (Volgograd), okungaba mnandi ukugubha uNyaka Omusha WamaShayina nenala bethamele ilanga ehlobo. Uma wayefisa, bayakwazi ukuzihambela baye ngokubabazekayo noMfula iVolga, indlela eya ukuthi the club lizwe kuyoba imizuzu eyishumi kuphela.
Ulwazi lokuxhumana kwekamu
Uma endaweni for iholidi noma ngempelasonto baba ukuzilibazisa "Oilman", izivakashi zayo zesikhathi esizayo kudingeka wazi yonke imininingwane ngalokho ukubhekana itholakala, kanjani lapho futhi ngalokho ucingo kuleli qembu ngaphambi.
I ngqo ikheli esikhungweni ukuzilibazisa lapho. Izivakashi ziyadingeka ukugxila ukukhokhela Five Okwesibili futhi izikhombo ukuthi kukhona uqinisekile ukukuholela uya khona. Kusukela Volgograd Ungakwazi ukuza lapha hhayi kuphela ngemoto, kodwa futhi ebhasini ngesikhathi inombolo 164. Yehla esitobhini sebhasi kuyodingeka babe phambi Okwesibili Five-Year Plan, futhi uqhubeke ukuhambisa izimpawu. Njengoba umhlahlandlela, ungase futhi usebenzise database "Oak Grove", okuyinto okuphambene.
Uma noma yimuphi imibuzo ungahlala ukubiza "Oilman" (ehostela, Volgograd). Ucingo Administration Country Club ukuthi: 8-937-549-4906.
Amakamelo akulesi izindlu zokuhlala
A amancane isakhiwo ezine storey, kuyatholakala kwi-Insimu amatende, inikeza 14 ukhululekile Suites izigaba nomndeni. Ngamunye wabo inikeza Slippers kanye ijazana lasebusuku, iqoqo ifenisha kudingekile, ehlanganisa lezingubo, eliseceleni kombhede amatafula kanye earphone we ezithambile ku Suites, kanye zokugeza, umoya-conditioner, i-TV, ngigeza futhi inthanethi wireless.
Umkhaya zamagumbi aqukethe igumbi isivakashi yokuhlala embhedeni eyengeziwe eyodwa. Suites efanayo, esinikela izivakashi zayo "Oilman" (ehostela, Volgograd), kukhona kokubili elilodwa elalingaphandle futhi ezimbili lokulala. Amakamelo, ehlanganisa amakamelo amabili, elikhulu egumbini lokuphumula futhi lokulala ethokomele nge umbhede double. Ezinye amakamelo ayatholakala Ngaphezu kwalokhu okungenhla, bidet, iketela kagesi, izitsha kanye etafuleni lokudlela elihle elinezihlalo ezingu.
Izindlu nesokuphumula esekusithekeni
Izindlu, okuyinto angazamukela izivakashi the club lizwe "Oilman", has 15. Abanye babo emsamo ekhethekile wokhuni ngazimbili. Ngamunye wabo has a embhedeni kabili, a alo esihlalweni, ikhabethe, air conditioning, esiqandisini futhi ithelevishini. Indlu yangasese has a eshaweni, Slippers, amathawula lishone yezimonyo.
Cottages eziningana abe Veranda nekhishi ne-microwave oven. Futhi itholakala esizeni kukhona Cottages ambalwa ukhululekile, ehlanganisa lokulala, ekamelweni elincane eziphilayo kanye nekamelo lokugezela, lapho ophahleni nezindonga embozwe ukhuni yangempela.
Amanani indawo yokuhlala "Oilman"
Indawo nokokuzilibazisa sabantu abanemfundo yamazinga ahlukene ingcebo inikeza ehostela "Oilman" (Volgograd). Amanani lapha ukuqala ruble 3500 ngabunye igumbi umndeni e isakhiwo main. I Suites ekilabhini izwe ihlukile, futhi ngenxa yalokho izindleko amabanga abo. Ngokwesibonelo, eshibhe elilodwa elalingaphandle suite kubiza ruble 4100 ngelanga, kodwa zikanokusho kunazo elilodwa elalingaphandle efulethini izobiza 10 000. Kukhona indawo 5400 futhi 7000 ruble ngosuku.
Ukhululekile bathinteka "Oilman" izindlu i choice omuhle kulabo izihambi ngubani ufuna ukuzilibazisa Volgograd kanye Volgograd esifundeni ngamanani akhokhelekayo. Indlu ngaphandle emakhishini ezimbili izobiza 3650 k. ngosuku. A endlini, esesikhundleni ekhishini ayo, izobiza ruble 200 ngaphezulu.
"Oilman" - ehostela (Volgograd), abelana yokuhlala lapho ngezikhathi sokujabulisa izivakashi zayo. Ngezinye izikhathi ukuphila kungaba ishibhile. Ngokwesibonelo, ngezinye izikhathi ungathola isaphulelo kusukela ngoLwesihlanu kuze kube yiSonto futhi ukukhokhela usuku olulodwa nje esikhundleni amabili. Futhi amasheya at kokuhlala isikhathi eside ekilabhini zwe.
Amasevisi izivakashi ukuzilibazisa isikhungo
Yiqiniso, i-club lizwe "Oilman" - indawo lapho ungathola hhayi kuphela nophahla phezu kwekhanda lakho kanye ebhentshini elingaphansi ngesikhathi ikhishwe. Kukhona uhlu olude izinkonzo nezinsiza ezokwenza ukuhlala isivakashi ngamunye kule yokuchitha isizungu ezimnandi kakhulu.
Kukhona yokudlela eziyinkimbinkimbi esikhulu, eyenzelwe abantu 250, i-bar ongaphandle kanye cafe, owawuseduze izindlu zokuhlala. Ngenxa lokhu kuhlukahluka ngokunikeza izindawo sonkana holidaymakers abakwazi ukhathazeke uma ngokungazelelwe musa sengilungisile ngokwabo ukudla. "Oilman" - ehostela (Volgograd), lapho kungekho muntu niyolamba!
Ukubeka kushisa uyabukeka futhi kuqabule, endaweni swimming pool kanye emphemeni izihlalo ibekwe bazungeza, ngokuphelele evumelana amaningi bethamele ilanga. Omncane izivakashi ukuzilibazisa isikhathi omkhulu ukuze usethe kubo ebaleni lokudlala, lapho ungakwazi ukugibela futhi ugijime ngokwanele.
Izivakashi nethuba ngisho ukubukela intandokazi noma movie entsha esikrinini esikhulu, ngoba lapha has cinema lalo. Ungakwazi uphumule sauna, futhi abalandeli ukuncintisana ungadlala table tennis noma amabhiliyade. Labo abafuna ukuchitha isikhathi ngaphandle neqembu labangane osondelene nalo kanye mathupha apheke izoso okumnandi noma okunye ukudla oku umlilo, ungakwazi ukuqasha Gazebo futhi BBQ.
Uma wayefisa, izivakashi ongeza "Oilman" ngisho elinesilwanyana yakhe ayithandayo. Nokho, kulesi simo, bazokwazi ukuhlala yedwa endlini. Futhi, bona kuyodingeka bakhokhe ruble ngelanga 300 kuya kwangu-600 ngale nsiza.
umcimbi Unforgettable loMfula eVolga
Chalet "Oilman" liyindawo enkulu lapho ungakwazi nje uphumule ithanga bemvelo, kodwa benza iholidi noma ibhizinisi mcimbi oyindumezulu. Isakhiwo yokudlela nihlela dinner Chic. Imibhangqwana eminingi eshadile, isibonelo, gubha emshadweni wabo lapha. Uma wayefisa, bangase amboze ngisho yoke imikhawulo kusukela abangaphandle, ngakho noyedwa abanye cha limele them ngalolusuku fabulous.
Uyatholakala izwe ethiyetha club, uma kunesidingo, is ibe ikamelo inkomfa uwuhlomele kahle. Kuyo, kunoma yimuphi umhlangano ibhizinisi noma isethulo izobanjelwa ezingeni eliphezulu kakhulu.
"Oilman" - ehostela (Volgograd), ukubuyekezwa zazo iningi labo aqukethe bahle kakhulu izimenywa wavakashela lapha. Bonke ukugubha ngokuchichima zasemazweni endaweni, ukudla okuhle yokudlela idina endaweni kanye namakamelo ehloniphekile nge ifenisha enhle. Abanye abantu bakithi aveze ukuthi kakhulu base lokuphumula kusobala ayisekho abasha njengoba 10-15 iminyaka kakade. Kulokhu, akukho izikhalazo noma ukubukeka isitokwe izindlu, noma yokuqedela layo langaphakathi akekho omunye.
Nokho, ezinye zezivakashi ayachitheka yokuntula ukuzithiba ihlelwe ekamu lolwandle indawo loMfula i-iVolga. Nakuba ukuya eduze zasendle - imizuzu 15-20 kuphela. Kanti futhi, abantu abaye bavakashela lapha ungathanda ukubona ezinye izithombe more nokuzijabulisa, ezifana isevisi ibhayisikili sokuqasha, nokunye okunjalo.
Monkey uNcibijane ngezandla zabo. monkey yezandla ku uNcibijane ngezandla zakhe bese ukukhilosha izinaliti
Air Conditioning "Lenore" ilondolo: Izibuyekezo ikhasimende